Vovoka NMN - mpamatsy orinasa mpanamboatra
/ Products / Nootropics vovoka / β-Nicotinamide Mononucleotide
Rating: Sokajy: Nootropics vovoka
AASraw dia manana ny mari-pahaizana hanomezana vokatra manohitra ny fahanterana-NMN Powder amin'ny alàlan'ny fifehezana CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao azo zahana. Ny famokarana antonony isam-bolana dia mety hahatratra 1500kg. Tongasoa eto hifandray aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fividianana:
Status: Ao anaty tahiry
Kitapo fonosana: 1kg / kitapo, 25kg / amponga
Fikarakarana sy fitantanana 2-8 ° C amin'ny toerana maina
♣ NAD + dia coenzyme tena ilaina amin'ny fiainana sy ny asan'ny sela.
♣ Ny haavon'ny NAD +, indrindra ny endriny NAD +, mihena voajanahary amin'ny taonan'ny sela maro.
♣ Ny vatana dia mamorona ny NMN ho toy ny dingana eo anelanelan'ny "precursor" mankany amin'ny NAD +. Raha tsorina dia hoe: ny haavon'ny NMN avo kokoa dia midika hoe haavon'ny NAD + avo kokoa.
Voamarika: Amin'ny lahatsoratra manaraka, NMN no ampiasaina fa tsy β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide: Tombony sy fampiasana
Ny fahanterana dia fizotra voajanahary izay mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-tarehy. Ny famantarana voalohany ny fahanterana dia miharihary eo amin'ny tarehy sy ny tendany amin'ny endrika tsipika sy kentrona tsara. Ny vokatra kosmetika amin'ny fahanterana dia matetika mihombo noho ny antony exogenous toy ny fipoahan'ny UV ka miteraka hoditra simba miaraka amin'ny fihenjanana, fitaintainana ary ireo loto mandoto ny tontolo iainana izay manentsina ny mason-koditra ka miteraka fahasosorana sy mony maharitra.
Ireny ketrona ireny dia marika fanatsarana tarehy sy hita maso ivelany fotsiny momba ny fahanterana fa ao anatiny, dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahafahanao manao hetsika fiainana isan'andro amin'ny hafanam-po sy hery mitovy amin'ny teo aloha. Ankoatr'izay, ny fahanterana dia mety hisy fiantraikany amin'ny lanjanao sy ny metabolismanao, izay matetika miteraka fihenan-danja tsy mahasalama mifandraika amin'ny tahan'ny metabolisma basal miadana.
Ny fiovana mifandraika amin'ny fahanterana dia tsy azo sorohina amin'ny ankabeazany satria ny sasany amin'izy ireo dia vokatry ny fihenan'ny metabolisma mitochondrial sy ny fiovan'ny fitenenana. Ny ankamaroan'ny fiovana ara-batana izay mitranga amin'ny fahanterana dia vokatry ny fihenan'ny haavon'ny NAD +, coenzyme iray lehibe ho an'ny homeostasis sy metabolism izay hita ao amin'ny zavamananaina velona rehetra.
Mandritra ny fahatanorantsika, ity coenzyme ity dia mandray anjara amin'ny ankamaroan'ny fihetsika mamokatra angovo mitochondrial ary hita be ao amin'ny vatana. Na izany aza, rehefa mihantitra isika dia manomboka mihena be ny haavon'ny NAD +.
Ny fanampin-tsakafo fanoherana fahanterana dia avo lenta ary ampiasain'ny olona erak'izao tontolo izao amin'ny fanantenana ny fanoherana ny vokatry ny fahanterana. Na izany aza, tsy izy rehetra no mandaitra satria ny ankamaroan'izy ireo dia tsy misy fiantraikany amin'ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatana. Vokatry ny fanadihadiana maro. ny mpahay siansa sy ny mpikaroka dia nahita vahaolana hiadiana amin'ny famantarana ny fahanterana, elixir de la vie, izany hoe, Nicotinamide Mononucleotide izay avy hatrany dia niova ho NAD + tao anaty vatana ny fihinana am-bava.
Inona ny atao hoe Nicotinamide Mononukleotida (NMN)?
Nicotinamide Mononucleotide dia nukleotida iray izay nalaina avy amin'ny niacin na vitamina B3 izay hita ihany koa, toy ny amin'ny voankazo sy legioma sasany toy ny avocado sy edamame. Vao haingana ny NMN dia nahazo vahana ho toy ny famenon-tsakafo fanoherana fahanterana, ny ankamaroany dia vokatry ny famoahana ilay boky, Lifespan, nataon'i David Sinclair.
NAD + dia fantatra ho marika famantarana ny fahanterana nandritra ny fotoana kelikely, saingy sarotra ny miady amin'ny vokatry ny fahanterana amin'ny haavony. Ny ankamaroany dia satria ny fandinihana voalohany dia nifantoka tamin'ny fampitomboana ny haavon'ny NAD + amin'ny vatana amin'ny fampiasana fanafody NAD +. Na izany aza, tsy ela dia hita fa ny NAD + dia tsy manana bioavailability tsara amin'ny vatana izay midika fa tsy mora voataona izy io, ary ny fihinanana azy exogenous dia tsy misy fiantraikany amin'ny haavony endogenous.
Ny fanampiana NMN dia mpialoha lalana mahery an'ny NAD + izay zava-dehibe amin'ny fizotry ny famokarana angovo ao amin'ny vatan'olombelona. Na izany aza, ny fikarohana voalohany momba ny fampiasana vovoka NMN na fanampin-tsakafo ho toy ny famenon-tsakafo mety ho fanoherana fahanterana dia natao ihany tamin'ny taona 2020. Mbola lavitra ny lalan'ny NMN eo amin'ny tontolon'ny fikarohana fa ny fanadihadiana natao hatreto dia nanaporofo ny tombony azo tsapain-tanana sy vokatry ny NMN amin'ny fahanterana.
Ny haavon'ny NAD + dia azo ampitomboina amin'ny iray amin'ireo mpialoha lalana azy roa lehibe, ny NMN araka ny voalaza etsy ambony na ny NR. Ny NMN sy ny NR dia miaraka, miaraka amin'ny fanovana ny NMN ho NR izay zava-dehibe amin'ny fampidirana ilay teo aloha ao amin'ny vatana. NR dia mijoro ho an'ny ribotide Nicotinamide izay afaka mampitombo ny haavon'ny NAD + endogenous. Ny fanampiana miaraka amin'ny NR hiadiana amin'ny vokatry ny fahanterana dia nodinihina tsara miaraka amin'ireo fanampiana NR nambara ho toy ny fanampiana azo antoka sy azo leferina.
Ahoana ny fomba fiasan'ny NMN amin'ny vatana?
Ny NMN dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotry ny famokarana angovo sy ny fanamboarana ADN ao amin'ny vatana, na dia tsy ankolaka aza. Ny NMN dia mampiroborobo ny synthesis na famokarana NAD + ao amin'ny vatana handresena ny tsy fahampiana, amin'ny alàlan'ny lalan'ny famonjena. Ny NAD + dia azo amboarina amin'ny fomba mihoatra ny iray ary ny làlan'ny famonjena dia miankina amin'ny fiasan'ny NMN mety. Ny lalan'ny Salvage dia manondro làlana iray izay mamokatra NAD + miaraka amin'ny vokatra faran'ny fanapahana NAD + toy ny niacinamide na NAM. NAM dia niova fo mivantana ho NMN izay avy eo, tamin'ny alàlan'ny dingana samihafa, dia mamokatra NAD +. Ity no asan'ny NMN manan-danja indrindra amin'ny vatana ary antony lehibe ao ambadiky ny fiakaran'ny lazan'ny NMN.
Raha vantany vao mihinana am-bava NMN am-bava ianao dia inoana fa navadika ho NR ao amin'ny vatana izy ireo satria tsy afaka mamakivaky ny fonontselana, mankany amin'ny sela ny fitambarana NMN. Aorian'ny fidiran'ny NR ao amin'ny sela dia averina miverina ho NMN amin'ny alàlan'ny vokatry ny anzima iray manokana; nikotinamide ribose kinase na NRK. Ity NMN ity dia manaraka ny lalan'ny famonjena ho an'ny biosynthesis an'ny NAD + hamenoana ny haavon'ny farany amin'ny vatan'olombelona.
Zava-dehibe ny manamarika eto fa ny famenoana NAD + amin'ny alàlan'ny famenon'ny NMN dia tsy vitan'ny fitomboan'ny angovo fa koa manana tombony ara-pahasalamana maro hafa izay manampy fotsiny ny fampiakarana ny fanampiana NMN.
Tombontsoa ara-pahasalamana NMN
Ny fananana NMN manohitra ny fahanterana dia tsy vokatry ny fitomboan'ny haavon'ny NAD + fa koa ny vokatry ny lalan'ny NMN sy ny asany ao amin'ny vatan'olombelona. Ny tombony lehibe ho an'ny NMN dia ny fahafahany mampitombo angovo finday sy ara-batana satria mampiroborobo ny NAD + na izany aza, ny tombontsoa hafa dia tsy tokony hohadinoina, indrindra raha mijery ianao raha ny NMN supplementation no safidy mety aminao.
Ny maha-mpanentana ny NAD + dia mamela ny NMN hamokatra tombontsoa ara-pahasalamana maro hafa, toy ny:
· Fitantanana ny fiterahana
Ny tranga matavy loatra dia nitombo be hatramin'ny 30 taona lasa izay, ary ny isan-jaton'ny zaza matavy dia nitombo avo roa heny tao anatin'izay 30 taona izay. Mampatahotra indrindra izany satria ny hatavezina dia manaloka anao amin'ny aretina marobe mety hahafaty. Ny tahan'ny metabolika basal ambany no tena antony mahatonga ny hatavezina mifandraika amin'ny taona izay hita matetika amin'ny olona antitra. Ny fifehezana an'io karazana matavy manokana io dia mitaky fomba multifactorial izay mikendry hormonina noana miaraka amin'ny tahan'ny metabolika. Ny fandinihana natao tany Qatar dia nahitana fa ny famenon'ny NMN amin'ny maodelin-biby dia nampitombo ny fitomboan'ny fiheverana ny hormonina roa manan-danja amin'ny famoretana ny fiankinan-doha sy ny fizahana metabolisma; leptin sy sirtuin, tsirairay avy. Ity fandinihana ity dia mampiseho fa ny fihinanana am-bava ny NMN dia mety hanafoana ny hanoanana hanampy anao hanary lanja ary koa hampitombo ny tahan'ny metabolisma, izay samy manitatra ny fihenan-danja azonao.
Ankoatr'izay, hitan'ny mpikaroka fa ny NMN dia mampitombo ny haavon'ny NAD + izay amin'ny sela matavy dia misy vokany manatsara ny metabolisma, manampy bebe kokoa amin'ny fihenan-danja.
· Fanaraha-maso diabeta
Ny diabeta dia iray amin'ireo fahasarotana amin'ny hatavezina ary ny fampiasana fanafody NMN hitantanana sy hitondrana ny hatavezina dia mety hisoroka ny diabeta tsy hivoatra. Saingy tsy izany ihany no vokatry ny NMN amin'ny haavon'ny siramamy amin'ny rà. Ny fihenan'ny NAD + nihena dia hita fa mifandraika amin'ny fihenan'ny fiasan'ny sela beta ao amin'ny sarakaty, ny loharanon'ny insuline ao amin'ny vatana. Mino ny mpikaroka fa io no pathophysiology lehibe aorian'ny fivoaran'ny diabeta mellitus karazana 2 amin'ny olon-dehibe.
Ny fanadihadiana natao tamin'ny maodelim-biby dia naneho fa ny totozy diabeta sy be taona, rehefa nomena fanampin-tsakafo NMN, dia nanatsara ny asan'ny sela-beta satria mameno ny fivarotana NAD + ao amin'ny vatana. Ny fandinihana iray hafa dia nifantoka tamin'ny fitadiavana lasibatra fitsaboana ho an'ny diabeta mellitus karazana 2 mifandraika amin'ny fahanterana ary nahita fa ny fanampiana NMN dia mety hisy fiatraikany amin'ny aty sy hampitombo ny fihanaky ny tavy. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mampihena ny fitehirizana tavy ao amin'ny vatana sady manatsara ny fandeferana glucose ao amin'ny vatana.
Ny fanampin-tsakafo NMN dia manana làlana marobe izay manampy amin'ny fanatsarana ny fandeferana glucose sy ny fanoherana ny insuline, amin'izay manampy amin'ny fitantanana diabeta mellitus karazana 2 amin'ny olona antitra. Ny làlana mitovy amin'izany dia ampiasaina hanamaivanana ny soritr'aretin'ny aretina metabolika hafa izay mivoatra mandritra ny fizotry ny fahanterana.
· Fampitomboana ny fiasan'ny rafitra fiarovana
Raha jerena fa ny famenony amin'ny NMN dia lasa safidy azo natao vao haingana izay natao fikarohana, farafaharatsiny amin'ireo maodelin-biby, tsy mahagaga raha ny anjara asan'ny NMN dia nodinihina mikasika ny aretina COVID-19.
Nandritra ny fandalinana ireo anjara asa samihafa amin'ny coenzyme marobe, NAD +, ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa izy io koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiasan'ny hery fiarovan'ny vatana. Ny areti-mandringana COVID-19 farany teo dia nanosika ireo mpikaroka handinika ny fifandraisana manokana misy eo amin'ny famenon-tsakafo NMN, ny fampitomboana ny NAD +, ary ny fiasan'ny hery fiarovan'ny vatana mba hanoherana ny vokatry ny virus.
Ny fandinihana iray toy izany dia nahatsikaritra fa nihena ny haavon'ny NAD + ary avy eo, nitombo ny taonany, ary niteraka karazana areti-mifindra mahery vaika. Hita ihany koa fa ireo marary ireo dia atahorana kokoa ho voan'ny comorbidity sy ny fahafatesan'ny olona noho ny aretina COVID-19. Vokatr'ireto fikarohana ireto dia azo heverina fa ny suplement NMN dia mety hampihena ny hamafin'ny COVID-19 misy fiatraikany amin'ny hery fiarovan'ny vatana sy ny vatan'olombelona.
· Fananahana bevohoka vehivavy
Ny vehivavy dia voakasiky ny famantaranandro biolojika izay mametra ny fahaizany miteraka amin'ny taona. Ny fandinihana samihafa natao tamin'ny maodelim-biby vehivavy dia nahita fa ny suplement NMN dia mety afaka mampihena ireo fetra ireo ary mitsabo ny tsy fiterahana mifandraika amin'ny taona aza amin'ny tranga sasany.
Ny fanadihadiana natao tamin'ny totozy vavy efa antitra voajanahary dia nahatsikaritra fa ny fihenan'ny haavon'ny NAD + dia mety hiteraka fihenan'ny kalitaon'ny oositita miaraka amin'ny fihenan'ny isan'ny oositaly, izay mampihena ny fahafahan'ny fiterahana sy ny fiterahana. Ny famerenana ny haavon'ny NAD + amin'ireto maodely biby ireto miaraka amin'ny fanampiana NMN dia hita fa mampitombo ny kalitaon'ny oocyte sy ny isany, noho izany dia manatsara ny fahafahan'ny miteraka.
Ny fanadihadiana iray hafa dia natao mba hanombanana izay tena mampihena ny kalitaon'ny oocytes amin'ny taona. Ho an'ity fandinihana ity, ny oositita avy amin'ny vehivavy antitra dia nangonina sy nianarana, mba hahalalany tsara ny pathophysiology. Hitan'ny mpikaroka fa ny fihenan'ny kalitaon'ny oosit dia vokatry ny fiovan'ny teboka ao amin'ny DNA mitochondrial an'ny oosit izay mivoatra noho ny tsy fifandanjan'ny haavon'ny NAD +. Izany no mahatonga ny famenon'ny NMN hampiakarana ny haavon'ny NAD + inoana fa hanatsara ny fiterahana sy ny fahasalamana amin'ny fiterahana, indrindra amin'ny vehivavy antitra.
Koa satria ny vehivavy antitra dia mamoy ny ankamaroan'ny fahaizany miteraka mandritra ny fadim-bolana, ny fanampin-tsakafo NMN, miaraka amin'ny fahaizana manatsara ny fahasalaman'ny fiterahana dia mety ho afaka hanodina ny fivalanana, amin'ny lafiny iray. Io dia ahafahan'ny vehivavy mahavokatra lava kokoa ary manana kalitaon'ny oosit na avo lenta na dia rehefa tafita ny fetin'ny taona ankapobeny aza izy ireo.
· Fitomboan'ny fikorianan'ny rà
Araka ny fikarohana nataon'ny Dr. DAvid Sinclair, biolojika tompon'andraikitra amin'ny lazan'ny fanampin-tsakafo NMN, rehefa mihantitra isika, dia mihena ny isan'ny sy ny kalitao ny sela endothelial izay manakaiky ny lalan-drantsika. Izany dia misy fiantraikany amin'ny otrikaina izay miampita avy amin'ny ra mankany amin'ireo sela izay ivoahan'ny sambo, ka misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny lalan-dra amin'ny ankapobeny. Ireo fanovana ireo dia inoana fa antony lehibe aorinan'ny fitomboan'ny fihenan'ny lalan-dra amin'ny lalan'ny lalan-dra eo amin'ny olona antitra.
Ny suplement NMN na ny suplementement NR dia mitombo ny haavon'ny NAD +, izay arak'ity fanadihadiana ity dia mahatonga ny sela endothelial hiasa sy matanjaka hamokatra lalan-dra vaovao rehefa mijanona tsy mandeha tsara ireo taloha.
· Fampandehanana kognitive mihamitombo
Ny aretina Neododegenerative dia aretina mahazatra izay misy fiatraikany amin'ny ati-doha, mampihena ny fiasan'ny kognita sy ny kalitaon'ny fiainana. Ny fanampiana miaraka amin'ny NMN hampitombo ny haavon'ny NAD + dia inoana fa tena mahomby amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognita ary ny fanatsarana ny fahaveloman'ny selan'ny ati-doha.
Tao amin'ny fanadihadiana iray izay nanome modely biby misy ratra amin'ny ati-doha mahatsiravina sy neurodegeneration, P7C3-A20, dia hita fa io fitambarana io dia nanatsara ny fiasan'ny kognita ary nanakana ny fizotran'ny neurodegenerative.
P7C3-A20 dia fitambarana mpamokatra NMN izay mamokatra NAD + avy eo. Ny fanomezana totozy miaraka amin'ny TBI, io fitambarana io dia hita fa tsy hoe manana tombony ara-pahalalana fotsiny fa hita koa mba hampitomboana ny tsy fivadihana sy ny tsy fivadihan'ny rafitra amin'ny sakana amin'ny ati-drà, satria io fitambarana io dia ampahan'ny membrane.
· Fanatsarana ny fiasan'ny hozatra sy fiaretana mitombo
Ireo atleta te hanatsara ny fahaizany miaritra dia tokony handray fanampin-tsakafo NMN satria vao tsy ela akory izay no nahitana fa ireo fanampin-tsakafo ireo dia mety hanatsara ny fahaizany aerobika. Ity tombontsoa azo avy amin'ny famenony NMN ity dia vokatry ny famokarana angovo NAD + amin'ny hozatra, saingy zava-dehibe ny manamarika fa ireo atleta ireo koa dia miaina fiakarana lehibe amin'ny haavon'ny fiakaran'ny oxygen hozatra hozatra.
Tokony handray NMN Powder ve aho?
Ny NMN Powder dia manana tombony maro izay efa nodinihina tamin'ny antsipiriany, amin'ny maodelin'ny biby ary amin'ny laboratoara. Ny sasany amin'ireny tombony ireny dia nianarana tamin'ny olombelona, ​​ary nitondra vokatra tsara. Raha manomboka mahita ny mariky ny fahanterana ianao na amin'ny fihenan'ny fiaretana, ny fahaizan'ny atletisma, na ny marika kosmetika dia mety handray soa ianao amin'ny fakana fanafody NMN. Ny fampiasana azy ireo dia asaina manokana ho an'ireo izay manandrana mamadika ny soritr'aretin'ny fahanterana.
NMN Loza mety hitranga
Ny NMN dia fitambarana hita voajanahary ao amin'ny vatan'olombelona, ​​fa taorian'ny fikarohana sy fandalinana marobe dia hita fa tsy misy risika na fahasarotana mifandraika amin'izany. NMN, rehefa novokarin'ny mpamatsy NMN araka ny tokony ho izy ary voatahiry tsara ao amin'ny ozinina vovoka NMN sy ny tranonao, dia azo antoka tanteraka ho an'ny fihinan'olombelona. Zava-dehibe ny fitahirizana vovoka NMN satria raha tehirizina amin'ny toerana mafana izy dia hivadika niacinamide ary hanapoizina tsikelikely ny vatanao rehefa laninao.
Tsy mila miahiahy ianao fa ny vovoka NMN madio avy amin'ny orinasa NMN dia voatahiry tsara foana, amin'ny toerana mangatsiaka sy maina. Ankoatr'izay, ny mpanamboatra vovoka NMN dia manonta ihany koa ny làlan'ny fampiasana sy fitehirizana ny fonosana amin'ny famenon-tsakafo mba hahafantaranao ny fomba fampiasana azy ireo tsara indrindra, nefa tsy miteraka fahasarotana lehibe.
Tsara ihany koa ny manamarika fa ny fampiasana tsy tapaka ny fanafody NMN dia mety hiteraka fihenan'ny fahafahan'ny famoahana mamokatra ireo vokatra tadiavina. Noho io antony io dia asaina miala sasatra amin'ireo famenon-tsakafo ianao rehefa manomboka mahatsikaritra ny fihenan'ny tombontsoa NMN toy ny fihenan'ny torimaso sy ny fiakaran'ny aretina.
Raha ny fikarakarana sahaza no jerena mandritra ny dingan'ny famokarana sy ny fitehirizana, na ao an-trano izany na any amin'ny ozinina, dia tsy misy atahorana sy voka-dratsy mifandraika amin'ny fampiasana NMN.
Aiza no hividianana vovoka NMN tsara indrindra?
Azonao atao ny mividy vovoka NMN sy endrika hafa amin'ny famenon-tsakafo NMN amin'ny fivarotam-panafody an-tserasera, fivarotana ara-pahasalamana ary ireo mpiara-miasa aminy. Azonao atao koa ny mividy kitapo vovoka NMN izay misy vovoka NMN be dia be, na dia kilasy indostrialy aza izy io ary matetika novidian'ny orinasa lehibe manandrana manamboatra pilina sy kapsily NMN.
Azonao atao koa ny mividy vovoka NMN avy any Amazon na Amazon Prime, saingy tokony hitandrina ianao mba hividy ny tena vokatra avy amin'ireo mpivarotra voamarina satria mpivarotra sendra maro no mety hamitaka anao handoa vola be ho an'ny dupe na sandoka, na tsy misy akony eo ny fahasalamanao na misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamanao.
Alohan'ny hanombohanao miantsena vovoka NMN dia tokony hijery zavatra vitsivitsy ianao mba hahazoana antoka fa mividy vokatra tsara indrindra ho anao ianao.
Ny famenon-tsakafo NMN tsara indrindra dia izay amboarina miaraka amin'ny torolàlana sy ny protokol fiarovana rehetra. Ireo mpamatsy NMN dia tokony hiantoka fa ny fijerena fatratra ny fisorohana ny fandotoana ny vovoka NMN misy poizina na loto mety hiteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny soa ho an'ny vatan'olombelona.
Ankoatr'izay, ny vovoka NMN dia tokony, araka ny voalaza etsy ambony, dia tokony hotehirizina amin'ny toe-javatra mety izay tokony hotanana mandritra ny fitaterana ireo famenony.
FAQ Momba ny Powder NMN
· Afaka mamadika ny fahanterana ve ny vovoka NMN?
Ny vovon-tsakafo NMN dia ambara ho famenon'ny anti-fahanterana ary ara-drariny izany, satria mampitombo ny haavon'ny NAD + izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fampihenana ny haavon'ny angovo rehefa mihantitra ianao. Tsy izany ihany fa ny vovoka NMN dia afaka mamadika ny vokatry ny fahanterana amin'ny rafitra taova samihafa amin'ny vatanao ary hamerina anao amin'ny andro fahatanoranao sy mavitrika.
· Azo antoka ve ny vovoka NMN?
Ny vovoka NMN dia nodinihina tsara mba hanombanana ireo fiasa samihafa sy tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy amin'ny vatan'olombelona. Nandritra ireo fikarohana ireo, ny voka-dratsy mety hitranga ihany koa dia nodinihina ihany ho an'ny valiny mba hampisehoana fa ny fampiasana ny NMN dia tsy misy vokany mifandraika amin'izany. Ny fahasarotana rehetra mety hitranga amin'ny fampiasana vovoka NMN dia vokatry ny hadisoana nataon'olombelona na mpitondra fivavahana natao nandritra ny fitaterana na ny fitehirizana. Tsy misy ifandraisany amin'ny akora famenoana ny fanoherana ny fahanterana.
· Ohatrinona ny vidin'ny vovoka NMN?
Ny vovoka NMN dia famenon-tsakafo mora vidy ary lafo nefa heverina ho mendrika izany, raha jerena ny lisitr'ireo tombontsoa voaporofo ara-tsiansa. Ny vidin'ny vovoka NMN ambony dia tsy noho ny lisitr'ireo tombontsoa lava fa ny vokatry ny fizotry ny famokarana be dia be izay tena lafo ho an'ny ankamaroan'ny mpanamboatra NMN. Raha jerena ny toetra mahafa-po amin'ny famenon-tsakafo dia tokony ho azonao antoka foana fa mividy ny tena vokatra amin'ny mpivarotra voamarina ianao, indrindra raha mividy NMN an-tserasera ianao.
Ny famenon-tsakafo NMN dia nanjary malaza isan'andro, noho ny asan'ny biolojista David Sinclair izay nandany ampahany lehibe taminy koa dia ny fikarohana momba ny asa aman-draharaha akademika sy ny fandalinana ny vokatr'io nucleotide namboarina vitamina B3 io.
Ny NMN dia mpialoha lalana an'ny NAD + izay coenzyme ilaina amin'ny fiasa mety amin'ny lalan-metabolic, immune ary hormonal maromaro. Ny tena anjara asan'ny NAD + dia ny anjara andraikiny amin'ny fizotry ny famokarana angovo. Satria ny NAD + dia zava-dehibe amin'ny famokarana angovo, ny fihenan'ny fisiolojika amin'ny haavony rehefa lasa iray taona dia miteraka fihenan'ny haavon'ny angovo. Ny fanampiana NMN dia afaka manampy amin'ny fampitomboana angovo amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatana.
NMN koa dia manana tombony maro hafa toa ny fanatsarana ny fiasan'ny metabolika, ny fanatsarana ny fiasan'ny fo, ny kognita, ny lalan-dra ary ny hery fiarovan'ny vatana. Ireo fiasa ireo dia tohanan'ny porofo ara-tsiansa sy ny angon-drakitra, izay miantso ny fampiasana betsaka ny fanampiana NMN ho an'ny olona antitra mba hanampiana azy ireo hiverina amin'ny andro fahatanorany.
Ankoatra ny tombontsoa marobe an'ny NMN, ny lazany dia azo ekena ihany koa fa tsy manana risika lehibe na fahasarotana mifandraika amin'ny fampiasana azy. Raha tsapanao fa mahatratra anao ny taonanao ary maniry zava-pisotro avy amin'ny loharanon'ny fahatanorana, dia mety ho ny safidy NMN no safidy tsara indrindra ho anao.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC, et al. (Mey 2018). “+ Mandà”. Metabolisma sela. 27 (5): 1081–1095.e10. doi: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016. PMC 5935140. PMID 29719225.
 Stipp D (11 martsa 2015). "Beyond Resveratrol: The Anti-Aging NAD Fad". Tambajotra bilaogy amerikanina siantifika.
 Cambronne XA, Kraus WL (Oktobra 2020). "+ Synthesis sy Function amin'ny sela mammalian". Fironana amin'ny siansa biokimika. 45 (10): 858-873. doi: 10.1016 / j.tibs.2020.05.010. PMC 7502477. PMID 32595066.
 Bogan KL, Brenner C (2008). "Asidra nikotinika, nikotinamidà, ary nikôtinamid riboside: fanombanana molekiola ny vitamina NAD + mialoha eo amin'ny sakafon'ny olombelona". Famerenana isan-taona ny sakafo mahavelona. 28: 115–30. doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. PMID 18429699.
 Yue Yang, Anthony A. Sauve. Metabolisma NAD +: bioenergetika, famantarana ary fanodikodinana ho an'ny fitsaboana. Biochim Biophys Acta, 2016; DOI: 10.1016 / j.bbapap.2016.06.014.
 Mills KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, Uchida K, Yoshino J, Imai SI. Ny fitantanan-draharaha maharitra an'ny Nicotinamide Mononucleotide dia manalefaka ny fihenan'ny fisiolojika efa ela nifanaovana tamin'ny totozy. Cell Metab, 2016; DOI: 10.1016 / j.cmet.2016.09.013.
 Niels J. Connell, Riekelt H. Houtkooper, Patrick Schrauwen. NAD + metabolism ho lasibatry ny fahasalamana metabolika: efa hitantsika ny bala volafotsy? Diabetologia, 2019; DOI: 10.1007 / s00125-019-4831-3.
 Ann Katrin-Hopp, Patrick Grüter, Michael O. Hottiger. Fitsipika metabolisme glukose nataon'i NAD + sy ADP-Ribosylala. Sela, 2019; DOI: 10.3390 / sela8080890.
 Shuang Zhou, Xiaoqiang Tang, Hou-Zao Chen. Sirtuins sy fanoherana insuline. Front Endocrinol (Lausanne), 2018; DOI: 10.3389 / fendo.2018.00748.